OPERA NCHỌPỤTA NCHỌGHARỊ - OPERA - 2019
Gbanwee na ntọala izugbe
Nke mbụ, anyị na-amụta otú e si aga n'ozuzu nke Opera. Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ. Nke mbụ n'ime ha gụnyere ịmegharị òké, na nke abụọ - keyboard.
N'okwu mbụ, pịa Opera logo na akuku aka ekpe nke nchọgharị. Nchịkọta nhọrọ mmemme gosipụtara. Site na ndepụta e nyere na ya, họrọ ihe "Ntọala".
Ụzọ nke abụọ iji gbanwee gaa na ntọala gụnyere pịa Alt + P na keyboard.
Ịnweta peeji nke ntọala, anyị na-ahụ onwe anyị na ngalaba "Basic". N'ebe a, anakọtara ntọala kachasị mkpa site na ngalaba ndị fọdụrụ: "Nchọgharị", "saịtị" na "Nche". N'ezie, na nkebi a, ma chịkọta ihe kachasị mkpa, nke ga-enyere aka hụ kachasị onye ọrụ mgbe ọ na-eji opera nchọgharị.
Na nkwụsị mkpọchi "ad mkpọ", site na ịlele igbe ị nwere ike igbochi ozi nke ọdịnaya mgbasa ozi na saịtị.
Na "On Start" gbochie, onye ọrụ ahọrọ otu n'ime nhọrọ mmalite atọ:
oghere nke mbụ na peeji nke dị na nke otu panel egosipụta;
aga n'ihu ọrụ site na ebe nkewa;
oghere onye ọrụ-amaokwu a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ ọtụtụ peeji.
Otu nhọrọ dị mfe bụ iji wụnye ọrụ n'ihu site na nkewa. Ya mere, onye ọrụ ahụ, mgbe ọ malitere nchọgharị, ga-apụta na saịtị ndị ahụ o mechiri ihe nchọgharị weebụ na nke ikpeazụ.
Na "Ntọala" ntọala ntọala, ndekọ ndabara maka nbudata faịlụ dị iche. Ịnwekwara ike ịme nhọrọ iji rịọ ebe iji chekwaa ọdịnaya mgbe nbudata ọ bụla. Anyị na-enye ndụmọdụ ka ị mee nke a ka ị ghara ịtọ data ndị ebudatara n'ime nchekwa mgbe e mesịrị, tinyekwa oge na ya.
Ihe na-esonụ "Gosi ibe mmanya ibe" gụnyere igosi ibe edokọbara na ogwe ihe nchọgharị. Anyị na-akwado itinye ihe a n'ọrụ. Nke a ga-enye aka na mma nke onye ọrụ ahụ, na mgbanwe ngwa ngwa gaa na ibe weebụ ndị kachasị mkpa ma gara.
"Igbe" Gburugburu "Gburugburu na-enye gị ohere ịhọrọ nhọrọ nhazi ihe nchọgharị. Enwere ọtụtụ nhọrọ dị njikere. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmepụta isiokwu gị site na ihe oyiyi ahụ dị na diski ike nke kọmputa, ma ọ bụ wụnye ọ bụla n'ime ọtụtụ isiokwu ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke tinye-ons Opera.
"Igbe nchekwa nchekwa batrị" bụ ihe bara uru maka ndị nwe ụlọ laptọọpụ. N'ebe a, ị nwere ike gbanwee ọnọdụ nchekwa ikike, yana ime ka akara batrị dị na toolbar.
Na ngalaba ntọala kuki, onye ọrụ nwere ike ime ma ọ bụ gbanyụọ nchekwa nke kuki na profaịlụ nchọgharị. Ịnwekwara ike ịtọ ọnọdụ nke a ga-echekwa kuki naanị maka nnọkọ ugbu a. O kwere omume ịhazi nke a maka saịtị ọ bụla.
Ntọala ndị ọzọ
N'elu elu, anyị na-ekwurịta banyere ntọala ntọala nke Opera. Anyị ga-ekwukwa banyere ntọala ndị ọzọ dị mkpa nke nchọgharị a.
Gaa na ngalaba ntọala "Nchọgharị".
Na "Mmekọrịta" ntọala ntọala, ọ ga-ekwe omume ime ka mmekọrịta na nchekwa dịpụrụ adịpụ nke Opera. A ga-echekwa data nchọgharị dị mkpa ebe a: akụkọ nchọgharị gị, ibe edokọbara, okwuntughe saịtị, wdg. Ị nwere ike ịnweta ha site na ngwaọrụ ọ bụla ebe arụrụ ọrụ, nanị site na itinye paswọọdụ maka akaụntụ gị. Mgbe ị mepụtara akaụntụ ahụ, mmekọrịta nke data Opera na PC na nchekwa dị n'ime ya ga-eme na akpaghị aka.
Na "Nchọgharị" ntọala, ọ ga-ekwe omume ịtọ engine njikwa, yana ịgbakwunye ihe ọ bụla search engine na ndepụta nke engines na-achọta nwere ike iji site na nchọgharị.
Na mpaghara ntọala "Nchọgharị Nchọpụta" enwere ohere iji mee ụdị Opera. Nakwa ebe ị nwere ike mbupụ ntọala na ibe edokọbara sitere na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ.
Isi ọrụ nke "Asụsụ" ntọala nchịkọta bụ nhọrọ nke asụsụ ogbi nchọgharị.
Ọzọ, gaa na "saịtị" ngalaba.
Na ngosipụta ntọala "Ngosipụta," ị nwere ike ịtọ ọnụọgụ weebụ n'ime ihe nchọgharị ahụ, yana nha na ọdịdị nke font.
Na igbe ntọala "Foto", ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike gbanyụọ ngosi nke foto. A na-atụ aro ka ị mee nke a nanị na ngwa ngwa nke Ịntanetị. Ọzọkwa, ị nwere ike iwepu ihe oyiyi na saịtị ọ bụla, na-eji ngwá ọrụ ịgbakwunye ndị ọzọ.
N'otu aka ahụ, na ntinye ntọala "Plugins", ị nwere ike ikwe ma ọ bụ gbochie ọrụ nke plug-ins dịka dum, ma ọ bụ kwe ka e gbuo ha nanị mgbe ị kwadoro arịrịọ ahụ aka. Enwere ike iji otu ụdị a rụọ ọrụ maka saịtị ọ bụla.
Na igbe "Pop-elu" na "Pop-ups with video", ị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ njighachi nke ihe dị na ihe nchọgharị ahụ, nakwa ịhazi nkwụsị maka saịtị ahọpụtara.
Ọzọ, gaa na "Nche" ngalaba.
Na ntọala nzuzo ị nwere ike igbochi nnyefe nke data onye ọ bụla. Ọ na-ewepu kuki site na ihe nchọgharị ahụ, gaa na ibe weebụ, kpochapụ oghere, na mpaghara ndị ọzọ.
Na igbe ntinye VPN, ị nwere ike ime ka njikọ ejighi ama aha site na proxy na adreesị IP adreesị.
Na igbe ntinye "Autocomplete" na "Okwuntughe", ị nwere ike ịme ma ọ bụ gbanyụọ ụdị mpempe akwụkwọ, na nchekwa na ihe nchọgharị nke data akaụntụ na akụ weebụ. Maka saịtị ọ bụla, ịnwere ike iji nnwere onwe.
Ntọala nchọgharị na nnwale na nnwale
Na mgbakwunye, ịnọ na mpaghara nke ntọala, ma e wezụga maka ngalaba "Basic," ị nwere ike ime ka Ntọala dị elu na ala nke windo site na itinye ihe kwekọrọ na ya.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ntọala ndị a adịghị mkpa, n'ihi ya, ha na-ezo ya ka ọ ghara ichegharị ndị ọrụ. Ma, ndị ọrụ na-aga n'ihu nwere ike mgbe ụfọdụ na-enweta aka. Dịka ọmụmaatụ, iji ntọala ndị a, ị nwere ike iwepu nghazi ngwaike, ma ọ bụ gbanwee nọmba nke ogidi na ibe mbụ nke ihe nchọgharị ahụ.
Enwekwara nhazi nyocha na ihe nchọgharị ahụ. Enweghi ule zuru oke site n'aka ndị mmepe, ya mere e kenyere ha n'otu ìgwè dị iche. Ị nwere ike ịnweta ntọala ndị a site na ịpị okwu "opera: flags" na ebe ntinye ihe nchọgharị gị, wee pịa bọtịnụ Tinye na keyboard.
Mana, ekwesiri iburu n'uche na igbanwe ihe nwube, onye ozo na eme ihe n'eme onwe ya. Ihe si na mgbanwe pụta nwere ike ịbụ ihe kachasị njọ. Ya mere, ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma na nkà dị mkpa, mgbe ahụ, ọ ka mma ịghara itinye mpaghara nchọpụta a ma ọlị, n'ihi na nke a nwere ike ịba uru nke data bara uru, ma ọ bụ emerụ ihe nchọgharị gị.
A kọwara na n'elu usoro maka ịmepụta ihe nchọgharị Opera. N'ezie, anyị enweghị ike inye nkọwa zuru ezu na mmejuputa ya, n'ihi na usoro nhazi ahụ bụ onye ọ bụla, ọ dabere na mmasị na mkpa nke ndị ọrụ ọ bụla. Ka o sina dị, anyị mere ụfọdụ isi, na ìgwè nke ntọala ndị a ga-akwụ ụgwọ pụrụ iche maka n'oge nhazi nke nchọgharị Opera.